‘Tsapako Tao Anatin’ny Hoditro sy ny Taolako Io Fahasambarana Io’ : Nafana Ny Lalao Baolina Kitra Tao Afghanistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2017 4:14 GMT
Ekipam-pirenena baolina kitra Afghàna talohan'ny lalao nifanaovany tamin'ny Japana, fifanintsanana Amboara eran-tany FIFA 2018, Kianjaben'i Azadi, Teheràna. Sary avy amin'i Javid Nikpour ho an'ny Tasnim News Agency. CC 4.0 lisansa iraisampirenana.
Nony farany, nanoatra noho ny fety amin'ny alina ilay fampisehoana ara-panatanjahantena, lalao niadiana izay ho tompon-dakan'ny Ligy Voalohan'i Afganistana (APL).
Tsy midika izany fa tsy nahafinaritra ny nijery ilay lalao nikatrohan'ny Shaheen Aslatee avy any Kabola sy ny De Mainwand avy any Kandahar tamin'ny volana lasa. Vitsy ny fiadiana tompon-daka nasionaly no nifarana tamin'ny baolina fito maty tahaka ity iray ity, samy nandray ny andraikiny tamin'ny filalaovana tamin'ny famoronana tontolona fety tao amin'ilay kianjabe ny ekipa roa tonta.
Saingy ireo mpanohana ny De Mainwand Atalan, ekipa resy, na izany aza dia niala tamin'ilay lalaon'ny 27 Oktobra tamin'ny fahafantarana fa mihoatra lavitra noho ny baolina iray maty ny lalao. Tsy mbola ampy roapolo taona akory izay, no nampiasain'ny talibàna ho toerana famonoana olona ilay kianjabe filalaovana baolina kitra. Ankehitriny, miaraka amin'ny famaranana ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Ligy Voalohany Afgana andiany fahenina, dia ampiasaina hilalaovana baolina kitra indray izy.
Taorian'ny faharesen'ny ekipany 4-3, tamin'ny lalao nisy fanalavàm-potoana dia nisaotra ny mpikarakara, tao amin'ny Facebook, i Mujib Mashal, mpankafy ny De Mainwand Atalan noho ny ” nampitsanganany ny vahoaka.”
Saad Mohseni, Talen'ny vondrona MOBY any Dubai izay mpiara-manohana ny Ligy Voalohany Afgana dia nibitsika hoe:
Fahombiazana lehibe ilay lalao famaranana ny baolina kitra Afgàna halina, tsy mampaninona izay nandresy. Vahoaka an'alinkisa no nampahery nandritra ny ora 2
Naverin'ilay mpankafy baolina kitra, Haseeb Humayoon, indray ity fahatsapana iombonana ity :
Shaheen/Kabola + nahafaty baolina betsaka kokoa. Atlan/Kandahar+ nilalao tahaka ny tompondaka. Nandresy ny Afganistànantsika. Tsy maintsy averintsika miaraka , amin'ny fotoana rehatra ny andro tahaka izany
Nihaino avy any Kanadà mihitsy aza ilay mpanao gazety, Marjan Asadullah :
Shaheen Asmayee no nandresy tamin'ny Ligy Voalohan'i Afganistàna ! Mila ho lasa adala aty an-tany lavitra fa manana fireharehana 🇦🇫 ‘ndehana amin'izay alaivo sary ny tenanareo sy ireo medalin'ny fahamendrehana !!
Farhad Darya, afghàna kintan'ny mozika pop, izay nameno hafaliana ilay kianjabe niaraka tamin'ny fampisehoana mivantana namelombelona, dia nitantara tamin'ny TOLONews fa tsapany “tao anaty hoditro sy ny taolako io fahasambarana io.”
“Tamin'ity lalao androany ity, ekipa roa no nilalao, fa iray no mpandresy ary Afghanistàna izany,” hoy Darya.
Nanadihady ny tao ambadiky ny fototry ny fiverenan'i Afghanistàna indray ao amin'ny fanatanjahantena ankafizina manerantany ny Global Voices.
Baolina kitra valopolo taona mahery, fa nisy fahatapahana im-betsaka
Namakivaky làlan-tsarotra ny baolina kitra tany Afghanistàna. Niorina tamin'ny 1933 ny Federasion'ny Baolina Kitra Afghàna (AFF), ary mpikambana tao amin'ny FIFA ny 1948. Nilalao tamin'ny lalao Olympika tany Londona tamin'ny 1948 ny ekipam-pirenena, ary voatendry ho mpikambana ao amin'ny Konfederasioan'ny Baolina Kitra Aziatika tamin'ny 1954.
Fa nijaly ny baolina kitra Afghàna nandritra ny ady an-trano izay vaky taorian'ny nahatosehana ny fananiham-bohitra nataon'ny sovietika tamin'ny 1989. Nampandeferina ny baolina kitra nandritra ny andron'ny Talibàna (1996-2001), raha navadika ho toerana famonoana olona io kianjaben'ny firenena io.
Naverina indray niaraka tamin'ny fanomezan-tànana avy amin'ny Télé-realité
Taorian'ny nianjeràn'ny Talibàna, dia nipoitra indray ny baolina kitra niaraka tamin'ny fanohanan'ireo malala-tànana iraisam-pirenena. Nampiasa 1,5 tapitrisa dolara tao amin'ny firenena ny FIFA nanomboka tamin'ny 2005. Nandray anjara ihany koa ny Fikambanan'ny baolina kitra Alemàna sy ny Ligy voalohany Anglisy, raha toa ka naloan'ny governemanta japoney ny jirobe mpanazava nampiasaina tamin'ny lalaon'ny ligy.
Tamin'ny 2012 no nakàn'ny Ligy Voalohany Afghàna (APL) izao endriny izao, niaraka tamin'ny fanampiana avy tamin'ny fampisehoan'ny télé-realité. Miadan-e-Sabz, na Saha Maitso, dia novokarin'ny vondron'ny haino aman-jery Moby tamin'ny fiarahana niasa tamin'ny orinasam-pifandraisandavitra Roshan ho an'ilay fantsom-pahitalavitra tsy miankina TOLO TV. Tena fifaninanana talenta nifidianana ireo mpilalao ho an'ilay ligy vaovao ny fampisehoana. Nanomboka teo, dia nifidy izay ho azy ny klioba.
Nanana solontena ny faritra rehetra, fa any Kabola no atao ny lalao
Ekipa valo no milalao ao amin'ny ligy, ekipa solontena iray isak'ireo faritra valo ao amin'ny firenena. Vatsian'ny Federasion'ny baolina kitran'i Afghanistàna sy ny mpiaramiasa aminy, isan'izany ny orinasam-pifandraisandavitra Roshan ary ny Hummel international, ny ekipa tsirairay.
Mandray vola manodidina ny 12 dolara isanandro ny mpilalao. Tany Kabola avokoa no nanaovana ny lalao rehetra, satria sarotra ny mitondra ny fitaovana sy ny fanamby ho amin'ny fiarovana manerana ny firenena. Aorian'izay, ekipa efatra avy amin'ny vondrona roa izay misy ekipa efatra avy no tafakatra manao ny lalao antsasa-dàlana ary manaraka avy eo ny famaranana. Tena nampitaintaina noho ny maro ilay lalao famaranana nahatafidirana baolina fito tamin'ity taona ity !
Ao amin'ny aloky ny Talibàna
Ny kianjaben'i Ghazi ilay kianjabe izay nanaovan'ny talibàna famonoana olona, maily iray (1,5 km mahery kely) miala eo amin'ny kianjaben'ny Federasion'ny Baolina Kitra Afghàna izay ilalaovana ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ligy voalohany Afghàna. Ny ekipam-pirenena vehivavin'ny baolina kitra, na izany aza, dia milalao any Ghazi izay toerana matetika namonoana vehivavy am-pahibemaso. Araka ny filazan'ny lahatsoratra navoakan'ny Reuters tamin'ny 2008, dia nadiana ilay toerana filalaovana tao amin'ny kianjaben'i Ghazi ary nosoloina mba handroahana ireo horohoro sasany tamin'izany fotoana izany.
Milalao amin'ny fifanintsanana isam-paritra ny ekipam-pirenena vehivavy Afghana
Misy ekipa vehivavy 25 eo ho eo amin'ny sehatra samihafa amin'ny fanatanjahantena. Milalao any Kabola izy ireo, mirakotra tanteraka araka ny fombandrazana afghana. Mandray anjara matetika amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Federasionan'ny baolina kitran'ny faritra Atsimon'i Azia ny ekipam-pirenena vehivavy ary tafakatra tamin'ny dingan'ny manasa-dàlana tamin'ny fifaninanana teo aloha, fa tsy tafavoaka tamin'ny fifanintsanana isan-tarika tamin'ny andiany tamin'ny taona lasa natao tany India.
Mitia kokoa ny baolina kitra ireo mpanao politika amin'izao fotana izao ….
Nahazo fankasitrahana avy amin'ny ambaratonga faratampony amin'ny fanjakana ny mpilalao baolina kitra afghana. Nanatrika ilay lalao famaranana tamin'ny volana Oktobra ny Filohan'ny mpanatanteraka Abdullah Abdullah, raha toa ka nasain'ny filoha afghana Ashraf Ghani hilanonana tany amin'ny lapam-panjakana ireo mpilalao.
Nihaona tamin'ny mpandresy&mpifaninana tamin'ny APL 2017 ny Filoha Ghani. Namporisihiny sy narahabainy ny ekipa roa tonta.